ओरल सेक्समा सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्दा झन्नै ज्यान गएन प्रेमीको - E Net Nepal
Home Amazing World Relationship ओरल सेक्समा सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्दा झन्नै ज्यान गएन प्रेमीको
ओरल सेक्समा सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्दा झन्नै ज्यान गएन प्रेमीको
E NET NEPAL 8:30 PM Amazing World, Relationship,
पुरुषले महिलालाई बलात्कार गरेको, जबर्जस्ति यौन सम्पर्क राखेको जस्ता घटना हामीहरुले पढ्दै आएका हौँ । यौनको मामलामा मानिस कति हदसम्म गिर्न सक्छ ? भन्ने कुरा सायदै अन्दाज गर्न सकिएला । फ्लोरिडामा पनि यस्तै एउटा घटना घटेको छ ।
सधैँ पुरुषले महिलालाई आक्रमण गर्ने गरेको घटना सुन्दै आइरहेका हामीलाई यो घटना भने अलि फरक लाग्नेछ । किनकि यहाँ महिलाले पुरुषलाई आक्रमण गरेकी छिन । त्यो पनि ओरल सेक्समा पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसकेको निहुँमा !
एक स्थानीय समाचार पत्रमा भनिएको छ की ५० बर्षीय Jennie Scott ले आफुलाई ओरल सेक्समा पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्दै आफ्नो प्रेमी ३२ बर्षीय Jilberto Deleon स्खलित भएको झोकमा उनलाई घाइते हुने गरि हमला गरिन ।
हल्ला सुनेर छिमेकीहरुले पुलिस बोलाउदा थाहा भयो की नशामा धुत महिलाले आफ्नो प्रेमीलाई लट्ठी र फलामे रडको प्रहारबाट घायल गराइसकेकी थिइन । पुलिसले तुरुन्त महिलालाई हिरासतमा लिएको छ भने उनको प्रेमीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।उनको उपचार हुँदै रहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
Tags # Amazing World # Relationship
By E NET NEPAL at 8:30 PM
Labels: Amazing World, Relationship